Global Voices teny Malagasy » Niger: Mitsipaka ny fanalavana ny fe-potoana fiasan’i Tandja · Global Voices teny Malagasy » Print
Niger: Mitsipaka ny fanalavana ny fe-potoana fiasan'i Tandja
Voadika ny 05 Jona 2009 12:57 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Brea Nandika Lila
Sokajy: Nizera, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Politika
Miakatra ny tosi-dra any Niger taorian'ny soson-kevitra nataon'ny filoha Mamadou Tandja hanao fitsapan-kevi-bahoaka, izay raha lany, dia hamela ny filoham-pirenena hanova ny lalàm-panorenana hahafahany manalava ny fe-potoana hiasany, izay efa naharitra 10 taona.
Mamadou Tadja, filohan'i Niger hatramin'ny 1999, te hanova ny lalàm-panorenana hijanonany eo amin'ny fitondrana.
Ny herinandro lasa teo dia nofoanan'ny filoha Tandja ny solombavam-bahoaka, taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana momba ny lalàm-panorenana any Niger, izay nilaza fa fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana io fitsapan-kevi-bahoaka io ary koa fanitsakitsahana ny fianianana nataony amin'ny maha filoha azy, ka noho izany dia tsy manara-dalàna. Alatsinainy 1 may, fihetsiketsehana tany Niamey renivohitra izay niafara tamin'ny fifandonana raha nanapoaka baomba mandatsa-dranomaso tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy; raha toa ka nandoro fiara maro ny mpanao fihetsiketsehana tany Dosso, 140km any andrefana. Maro amin'ireo amntoko mpanohitra, sindika, ary ONG no nilaza fa hana fihetsiketsehana goavana sy fitokonana ny 07 jona ho avy izao.
Sarotra ny hahitana vohikala na bilaogy na resaka na ady hevitra mikasika izany any Niger. Na izany aza dia manaraka akaiky ny fizotry ny raharaha ny mpitoraka bilaogy amin'ireo firenena manodidina tahaka an'i Burkina Faso sy Tchad.
Nanoratra ny tchad futur  :
Lasa lamaody ho an'ny firenena afrikana maro ny fanovana ny lalàm-panorenana tato ho ato, na izany hataon'ny mpanohitra na izany hataon'ny mpitondra. I Niger izay nanome ohatra tsara amin'ny fanajana ny demokrasia noho ny fifandimbiasam-pahefana, no hatao telimoka noho ny fanitsiana ny lalàm-panorenana eo ambany mason'izao tontolo izao.
Hatramin'izao dia ny filoha Lybiana irery, Moummar Kadhafi, no filoham-pirenena tokana manaiky ity fitsapan-kevi-bahoaka ity. Mitsipaka kosa i Etazonia sy Canada. Milaza ny Tchad futur fa tsy maneho ny heviny i Frantsa na dia eo aza ny fifanarahana nosoniavin'ny AREVA sy Niger tamin'ny volana janoary lasa teo.
Any Afrika dia tsy araka ny hetahetam-bahoaka no hanovana ny lalàm-panorenana fa noho ny hetahetan'ny matanjaka avy any ivelany, ahafahany miantoka ny tombontsoany na dia manosihosy ny sandan'ny demokrasia sy tsy manaja ny zon'olombelona aza.
Ao amin'ny vohikalam-baovao Burkinabé Lefaso.net dia maneho ny heviny mikasika ny “fanonganam-panjakana araka ny lalàm-panorenana” any Niger i Alain Saint Robespierre:
Ao amin'ity resaka politika manjavozavo ity dia zavatra tokana ihany no tena azo antoka: tsy hihemotra mihitsy ilay mpitondra any Niamey na inon-kidona na inon-kitranga mandra-pahatongany eo amin'ny tanjona iriny dia ny fijanonany eo amin'ny fitondrana. Aoka itsy. Ho an'izay rehetra matoky fa hiverina amin'ny heviny ny filoha Nizeriana amin'ny faniriany hanalava ny fe-potoana fiasany, na dia eo aza ny lalàna sy ny fifanarahana nataony tamin'ny maha filoha azy, dia ho diso fanantenana eo.
Ho valin'izay dia nilaza ny mpamaky iray atao hoe Koudka:
Indrisy ry Afrikana! Tys maintsy hovana izao. Tsy mendrika izany ny vahoaka Nizeriana. Rehefa mieritreritra aho fa misy filoham-pirenena mihevitra fa tsinontsinona ny fireneny rehefa tsy eo izy kanefa hatramin'ny fotoana ela nitondrany dia tsy nisy zavatra niova akory. Te hanova izao tontolo izao tsotra fotsiny aho…
Milaza i Layer raha mitantara ny namonoana ny filoha Ibrahim Bare Mainassa, fa milalao afo i Tandja ary tsy mahafantatra ny tantara:
Araka ny voalazan'ny olona teo alohako dia misy ireo manadino ny atao hoe Wankage. Ary mazava fa hisy fanonganam-panjakana ao Niger, mazava ho azy koa fa hisy hamono i Tandja. Na izany aza dia tsy mendrika zavatra hafa ankoatr'izay izy.
Noderainy koa ireo mpanohitra an'i Tandja:
Tehaka be ho an'ny solombavam-bahoaka Nizeriana, ho an'i Mahamane Ousmane, ho an'ny fitsarana momba ny Lalàm-panorenana, ho an'ny filoha Guermakoye,… ho an'ny vahoaka nizeriana!
Atoa Tandja, izay vita tao anatin'ny 10 taona dia tsy ho vita ao anatin'ny 2 na 3 taona. Fotoana tokony hialanao amin'izay izao. Nanao tsinontsinona ny demokrasia afrikana ianao. Atoa Tandja, tokony ho ohatra tsara ho an'ny rahalahinao mpitongy seza ianao. Tandja, mialà amin'izay, mialà teo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/06/05/2489/